ဘ၀မှာ တွေးခေါ်တက်ဖို့ ဟာ သိပ်ကို အရေးကြီးတယ် – Justnow news
သစ်တုံးတစ်တုံးကိုတွေ့မြင်ရတာချင်းအတူတူပေမယ့်တွေးခေါ်ပုံချင်းက မတူကြဘူး။ ထင်းခွေ သမားက “အိမ်အတွက် တစ်ပတ်စာလောက်ထင်းတွေ လုံလုံလောက်လောက်ရပြီ” လို့တွေး တယ်။ လက်သမားက “အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက် သစ်ကောင်းကောင်းတော့ တွေ့ပြီ” လို့တွေး တယ်။ ပန်းပုဆရာက “လှပတဲ့ နတ်သမီးပုံကို ထုဆစ်နိုင်တော့မယ်” လို့တွေးတယ်။ သူတို့တွေ ဘယ်လိုပဲမြင်မြင် သစ်တုံးကတော့ ဘာမှပြန်မပြောပါဘူး။ အသုံးပြုသူရဲ့ လက်ထဲကို အသာတ ကြည် လိုက်သွားမှာပါပဲ။ အထက်ပါ လူ(၃)ဦးလိုပါပဲ… မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာ တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အရာမှန်သမျှဟာ ကောင်းသည်လည်းမဟုတ်သလို ဆိုးသည်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်း လား/ ဆိုးလား ဆိုတာ မိမိရဲ့ စိတ်နေသဘောထား(attitude) အပေါ်သာ မူတည်ပါတယ်။
ဆိုပါတော့… ပြဿနာတွေ အခက်အခဲတွေ အမှုအခင်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတဲ့အချိန်မှာ “ငါ့ ဘဝက ဆိုးလိုက်တာ” ဆိုပြီး စိတ်ဓါတ်ကျနေမလား? ဒါမှမဟုတ် “လောကမှာ ငါ့ထက်ဆိုး တာ တွေ အများကြီးပဲ”ဆိုပြီး ဖြေသိမ့်မလား? ဘဝမှာ ကံအကြောင်းမလှလို့ လဲကျသွားတဲ့အခါ “ငါ တော့ ဘဝပျက်ပါပြီ”လို့ တွေးနေမယ့်အစား ကိုယ့်ထက်ဆိုးတဲ့ ဘဝတွေကို ငဲ့ကြည့်ပြီး မိမိ ကိုယ် ကို နှစ်သိမ့်ရမှာပါ။ ပျော်ရွှင်ချင်လည်း ကိုယ့်စိတ်ပဲမပျော်ရွှင်ချင်လည်း ကိုယ့်စိတ်ပဲ မဟုတ်လား။ ကိုယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခြေအနေ/အနေအထားပေါ်မှာ ကိုယ်ဘယ်လို တွေးမိလိုက်သလဲ ဆိုတဲ့ အချက်ကလူလူချင်း ကွာခြားသွားစေတာပဲလေ။ အဓိက ပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့ Attitude ကိုပါ။ -လူလူချင်းတူရင်တောင် အတွေ့အကြုံရှိသူက သာတယ်။ -အတွေ့အကြုံချင်း တူရင် တောင် အရည်အချင်းရှိသူက သာတယ်။ -အရည်အချင်းချင်းတူရင်တောင် စိတ်နေသဘော ထားကောင်း သူက ပိုသာပါတယ်။ မိတ်ဆွေ… အကောင်းဆုံးအတွေးတွေပဲ တွေးပါ။
Credit ; Aung Ko Latt (ရာမညမြေ)
သဈတုံးတဈတုံးကိုတှမွေ့ငျရတာခငျြးအတူတူပမေယျ့တှေးချေါပုံခငျြးက မတူကွဘူး။ ထငျးခှေ သမားက “အိမျအတှကျ တဈပတျစာလောကျထငျးတှေ လုံလုံလောကျလောကျရပွီ” လို့တှေး တယျ။ လကျသမားက “အိမျဆောကျဖို့အတှကျ သဈကောငျးကောငျးတော့ တှပွေီ့” လို့တှေး တယျ။ ပနျးပုဆရာက “လှပတဲ့ နတျသမီးပုံကို ထုဆဈနိုငျတော့မယျ” လို့တှေးတယျ။ သူတို့တှေ ဘယျလိုပဲမွငျမွငျ သဈတုံးကတော့ ဘာမှပွနျမပွောပါဘူး။ အသုံးပွုသူရဲ့ လကျထဲကို အသာတ ကွညျ လိုကျသှားမှာပါပဲ။ အထကျပါ လူ(၃)ဦးလိုပါပဲ… မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာ တှကွေုံ့ရငျဆိုငျနရေတဲ့ အရာမှနျသမြှဟာ ကောငျးသညျလညျးမဟုတျသလို ဆိုးသညျလညျး မဟုတျပါဘူး။ ကောငျး လား/ ဆိုးလား ဆိုတာ မိမိရဲ့ စိတျနသေဘောထား(attitude) အပျေါသာ မူတညျပါတယျ။
ဆိုပါတော့… ပွဿနာတှေ အခကျအခဲတှေ အမှုအခငျးတှနေဲ့ ရငျဆိုငျဖွရှေငျးရ တဲ့အ ခြိနျမှာ “ငါ့ ဘဝက ဆိုးလိုကျတာ” ဆိုပွီး စိတျဓါတျကနြမေလား? ဒါမှမဟုတျ “လောက မှာ ငါ့ထကျဆိုး တာ တှေ အမြားကွီးပဲ”ဆိုပွီး ဖွသေိမျ့မလား? ဘဝမှာ ကံအကွောငျး မလှလို့ လဲကသြှားတဲ့အခါ “ငါ တော့ ဘဝပကျြပါပွီ”လို့ တှေးနမေယျ့အစား ကိုယျ့ထကျဆိုးတဲ့ ဘဝတှကေို ငဲ့ကွညျ့ပွီး မိမိ ကိုယျ ကို နှဈသိမျ့ရမှာပါ။ ပြျောရှငျခငျြလညျး ကိုယျ့စိတျပဲ မပြျော ရှငျခငျြလညျး ကိုယျ့စိတျပဲ မဟုတျလား။ ကိုယျကွုံတှရေ့တဲ့ အခွအေနေ/အနအေ ထားပျေါမှာ ကိုယျဘယျလို တှေးမိလိုကျသလဲ ဆိုတဲ့ အခကျြကလူလူခငျြး ကှာခွားသှား စတောပဲလေ။ အဓိက ပွောခငျြတဲ့အခကျြကတော့ Attitude ကိုပါ။ -လူလူခငျြးတူရငျတောငျ အတှအေ့ကွုံရှိသူက သာတယျ။ -အတှအေ့ကွုံခငျြး တူရငျ တောငျ အရညျအခငျြးရှိသူက သာတယျ။ -အရညျအခငျြးခငျြးတူရငျတောငျ စိတျနသေဘော ထားကောငျး သူက ပိုသာပါတယျ။ မိတျဆှေ… အကောငျးဆုံးအတှေးတှပေဲ တှေးပါ။
“ခါးနာနေသူများအတွက် ဆေးနည်း တိုများ”